Letters from Tavoy – ထားဝယ်မြို့နယ် ကျေးရွာသား သုံးထောင်က ရေကာတာစီမံကိန်းကို ကန့်ကွက်စာပို့ | MoeMaKa Burmese News & Media
ဇာနီကြီး - ဆိုင်းဘုတ်မထောင်ဘဲ ကရိန်းနဲ့ ဆွဲသည့် ရန်ကုန်
မေချို - အမေ့ အိမ်ပြန်ချိန်
Hlaing Tharyar - မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်စွာ ဥပဒေမဲ့ လူလူချင်း အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျမှုများ လှိုင်သာယာတွင်ဖြစ်ပွား
မိုးမခထံ ဧရာဝတီတိုင်းက ပေးစာများ (ဇူလိုင် ၂၉ ၊ ၂၀၁၂ )
ဇွန်မိုး - မြန်မာပြည်သို့ပေးစာ - အမှိုက်ကစ ပြာသာဒ် မီးလောင်
အိပ်မက်ထဲက အာအိုင်တီ - ex-RIT student
ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာပြည်သားတွေ အနိုင်ကျင့်ခံရခြင်းက ကင်းဝေးကြပါစေ
အထက (၂) ကမာရွတ်တွင် ဓားပြတိုက်ခံရ
Letters from Tavoy – ထားဝယ်မြို့နယ် ကျေးရွာသား သုံးထောင်က ရေကာတာစီမံကိန်းကို ကန့်ကွက်စာပို့
ထားဝယ်မြို့နယ် ကျေးရွာသား သုံးထောင်က ရေကာတာစီမံကိန်းကို ကန့်ကွက်စာပို့
မိုးမခထံ ပေးတဲ့စာကဏ္ဍ ၊ မတ် ၁၄၊ ၂၀၁၂
ထားဝယ်မြို့နယ်အနီး DELCO ကုမ္ပဏီက အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော အညာဖျားရေကာတာစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သတ်၍ ရွာသူရွာသား ၃၀၀၀ ခန့်မှ သူတို့၏ နစ်နာမှုများကို သမ္မတဆီ လက်မှတ်ရေးထိုးပေးပို့လိုက်ပါတယ်။ သမ္မဆီ တင်လိုက်သောစာကို ပူးတွဲပါဖိုင်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ ကိစ္စရပ်အား အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
အညာဖျားရွာ – ဦးခင်ကြည် (အုပ်ချုပ်ရေးမှုး) ၊ ဦးမြင့်အောင် ( အညာဖျားကျေးရွာအုပ်စု ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှုး) ( တဆင့် – ၀၉-၄၉၈၅၁၉ ၊ ၀၉-၈၇၅၂၁၉၆)
ဒါးသွေးကျောက်ရွာ – စောဒေးစံ ( အုပ်ချုပ်ရေးမှုး)၊ ဆရာဖိုးစူး ( တဆင့် – ၀၉-၄၉၈၅၁၉ ၊ ၀၉-၈၇၅၂၁၉၆)
ဆိပ်ချောင်းရွာ – ဆရာအဲလယ် ( တဆင့် – ၀၉-၄၉၃၄၂၅၁၅ – ဖုန်းနှင့် အိမ်ဝေးသည့်အတွက် ၁၅ မီနစ်ခန့်စောင့်ပေးရန်)
ညောင်ချောင်း – စောခင်ထူး ( တဆင့် – ၀၉-၄၉၃၄၂၅၁၅)
(အညာဖျားရွာ၊ ဆိပ်ချောင်းရွာတို့မှာ အဆက်သွယ်ရ အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်မည်။)
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ထံ ကျေးရွာသူ၊သားတို့ ရေးသားသည့်စာ
ထားဝယ်မြို့နယ်ကျေးရွာသားတို့ပြုစုသည့် သဘာဝရင်းမြစ်များ စာရင်း
ထားဝယ်ရေကာတာအကြောင်း ဒေသခံတို့၏ ၀က်ဆိုက် http://www.tavoyanvoice.com/
One Response to Letters from Tavoy – ထားဝယ်မြို့နယ် ကျေးရွာသား သုံးထောင်က ရေကာတာစီမံကိန်းကို ကန့်ကွက်စာပို့
Kyaw Tint Tun on March 14, 2012 at 9:18 pm
Yes,I strongly aggre it.In Dawei area,there are many gas resources and selling to Thailand foralong time.Why don`t we use these gases inspite of using the dam which make damages to the natural rescources.Can`t we use the gases,why? The hydropower project
can cause not only the project area but also damage the villages,(farm,rubber trees,betel tree)
along its route. Please all think about it .